Areka yaNoa. BNL Ministries - sn40
Mwari uye Nhoroondo akatevedzana.
Nzvimbo yeAreka yaNoa.
Vazhinji vakabuda munzira vakayedza kutsvaga Areka yaNoa, kusanganisira nhamba yavanoti vakawana, asi vakaratidzirwa kuti ndehwekunyepa.
Bhaibheri rakati... (Genesisi 8:4).
uye pazuva regumi namanomwe romwedzi wechinomwe, areka yakagara pamakomo eArarati.
Ndima 5 inopfuurira,
Mvura yakaramba ichiserera kusvikira pamwedzi wegumi, uye pazuva rokutanga romwedzi wegumi misoro yamakomo yakatanga kuonekwa.
Panguva iyo Areka payakazorora, gomo reArarati yakanga isiri volcano iripo nhasi. Chikonzero cheichi chirevo ndechekuti makomo aive asina kuoneka kusvikira mwedzi 2 nehafu gare gare, asi kubva panzvimbo yekuzorora yeAreka nhasi, gomo reArarati, yakamira makubhiti 16945 tsoka pamusoro pegungwa, inogona kunyatsoonekwa.
Kubva padenga, gomo reArarati iri pachena ichangopfuura kupfuura makomo ayo akavakirwa pariri. i.e. Makomo akapoterera, ivo vava sedimentary (emadhaka). Gomo reArarati kuputika kwemakomo.
Bhaibheri harina kutaura kuti Areka yakazorora pagomo Ararat, asi pamakomo enzvimbo iyoyo.
Nzvimbo yenzvimbo yekuzorora yeAreka inenge anenge 30km kumaodzanyemba kweGomo reArarati, padyo nemuganho weTurkey neIran, uye kwete kure nemusha unonzi Güngören. Izvi zvinozivikanwa nehurumende yeTurkey seAreka nzvimbo, uye pane zviratidzo zvemumugwagwa zvinoratidza izvi. (Areka yaNuh). Nuh ndiro revaKadheya (Bhabhironi) zita raNoa.
Iri ndiro Areka yaNoa?
(Mifananidzo nerukudzo rwe... BBC)
Mepu nzvimbo zveumwe mugumo wechinhu ichi.
Kuedzwa panzvimbo yeAreka.
Magnetometer bvunzo dzakaitwa panzvimbo yakatenderedza nzvimbo yeAreka, ratidza zvinokanganisa, izvo zvinoratidza kuti pane simbi iripo.
Iyi miedzo inoratidza kana shanduko mukukutu dzikaitika. Izvi zvinoratidza nzira yenguva dzose, mitsetse yakafanana, uye mitsetse yenzverwa, senge izvo zvinogona kutarisirwa kubva pamatanda makuru uye matanda kubva muchikepe-chakafanana nechimiro.
Boora masampuli bvunzo.
Mamwe Boora masampuli emhando dzakaratidza kuvepo kwemapuranga ezvisikwa, zvikamu zvered antler, pamwe nevhudzi izvo zvave zvichinzi ndezvekati, (Leopard). Ichi hachisi chizvarwa chenzvimbo iyi. Pane zvisaririra nezvipikiri akaita mativi mana akaenzana. Zvinofungidzirwa kuti izvi zvine basa kune kuverenga kwemaginetieter yakawanikwa.
Kufananidza kwaitwa yemifananidzo yemuchadenga yakatorwa pane rwendo siyana. Izvi zvinoratidza kuti nyika yakatenderedza yakatsika chikomo. Chikamu cheAreka mune aya mafoto, zvakadaro, haina kufambisa, uye zvakare iri kubuda pachena. Iyo yakawanda uye hukuru hwechimirozvinoita kuti irambe yakasimba.
Kureba kweareka riri 515 tsoka 6 nemainji. Kukura kweAreka yaNowa sezvakataurwa nezvake muBhaibheri, Genesisi 6:15,
Uku ndiko kuvaka kwaunofanira kuiita: Areka inofanira kureba makubhiti mazana matatu, upamhi hwayo huve makubhiti makumi mashanu uye makubhiti makumi matatu pakukwirira kwayo.
Kukura izvi ndizvo chaizvo yakarurama, kana mambo weEjipita makubhiti inoshandiswa (524mm), kuverenga urefu.
Kugadzikana - matombo anchor.
Kusiri kure neAreka nzvimbo yekuzorora kune matombo akati wandei, mune hunganziwo yakarurama mutsetse. Aya anotsanangurwa sematombo anchor.
Matombo anchor iri ibwe guru, zviri yakafara rimwe divi, yakatetepa mune imwe, paine gomba kumusoro, kubvumira kuti ibatanidzwe netambo. Dzakati wandei dzaidzikamisa ngarava, mumasuru makuru anogona kutarisirwa. Iwo akareba tsoka (8 kana kupfuura), yakakura kwazvo kupfuura mabwe e-anchor zvinowanzowanikwa.
Aya zvakare zvakare akawanda makiromita (120 km kana anopfuura) kubva pedyo gungwa kana munyanza.
Noa angadai akasunungura izvi zvishoma nezvishoma, kubvumidza Areka kukwira kumusoro mumvura, zvisati vakasvika yamira.
Webmaster iyi inoti...
Ino saiti inoda kuongororwa zvakare, nekuchera chiri chinhanho chinotevera, kuona chikonzero nezviyero zvinonakidza izvo zvakawanikwa.
Yakatofanana Areka yaNoa.
Pane yakazara saizi yakatofanana Areka yaNoa panguva Chisiko Museum, muna America.
Izvi zvinoratidza nzira dzinokwanisika dzekuvaka, nokuti chikepe kukura iyi.
Mifananidzo nerukudzo rwe...
Chikepe chemazuva ano.
Model Areka Kuedza.
Asi Mwari akarangarira Noa nemhuka dzose dzesango nezvipfuwo zvakanga zvinaye muareka, uye akatuma mhepo pamusoro penyika, uye mvura zhinji ikaserera.
Zvino zvitubu zvepakadzika uye masuo amafashamu okudenga zvakanga zvazarirwa, uye mvura yakanga yaguma kunaya kubva kudenga.
uye kumbira kanganwiro